Madaxweyne Siilaanyo Oo Sheegay In Dunida Qaarkeed Ku Riixiyaan in Ay Mar Kale Midoobaan Somaliland Iyo Somalia | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Sheegay In Dunida Qaarkeed Ku Riixiyaan in Ay Mar Kale Midoobaan Somaliland Iyo Somalia
Hargeysa(Araweelo News Network)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa sheegay in beesha caalamka qaarkood ay doonayaan inay
isku soo celiyaan Somaliland iyo Soomaaliya, balse waxa uu sheegay in ummaddani ay go’aansatay inay madax-banaanidooda la soo noqdaan.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sidaa ka sheegay kulan balaadhan oo is xog-waraysi ah oo uu maanta Huteelka Maansoor ee Magaaladda Hargeysa kula yeeshay Ardayda shan jaamacadood oo ku yaala magaaladda Hargeysa. waxa kale oo kulankaasi ka soo qeyb galay Wasiirrada Arrimaha dibada, Madaxtooyadda, dhalinyaradda iyo Ciyaaraha, Wasiir Ku xigeenka Warfaafinta iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in shacbiga Somaliland u midoobeen inay difaacaan qadiyadooda isla markaana ay si weyn u xusayaan munaasibadda 22-guurada ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii madax-banaanida Somaliland oo diyaar garaw weyn loogu jiro.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka soo qeyb galo kulankaasi, waxaanu majeertay doorka dhalinyaradu ugu jirto dalka, waxaanu yidhi “Waxa farxad aad iyo aad u weyn ii ah inaan ka soo qeyb galo xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ee ay ardaydii jaamacadaha dalku iskugu yimaadeen ee sida sharafta iyo qiimaha leh la noogu marti-qaaday. Waxaanu aad ugu faraxsan nahay oo ku faanaynaa dhalinyarada jaamacadaha, macalimiintooda iyo maamulkooda. Waxaanu u aragnaa inay dhalinyarada jaamacaduhu yihiin mustaqbalkii dalka.”
“Dhalinyaradu waa kuwii dalka xoreeyay, waa kuwii wax ka dhigay dalka, waana kuwii u halgamay. Inshaalaahu Tacaalaa inta hadhayna waa kuwa mustaqbalka xoriyadiisa keeni doona. Waa kuwa horumarkiisa keeni doona, waana kuwa madax-banaanidiisa daafici doona. Waana kuwa mustaqabalka ummadda hoggaamin doona inshaalaahu Tacaalaa,”ayuu sheegay Madaxweyne Axmed Siilaanyo.
“Waxaynu u dabaal-degaynaa 22-guuradii ka soo wareegtay la soo noqoashada madax-banaanida Somaliland ee 18-ka May. Halgan aad u dheer oo ay ku baxeen naf iyo maalba ayaynu u soo hurnay si aynu dalkeena u xorayno. Illaa imika ictiraafkii aynu dunida ka rabnay maynu helin, laakiin dunidu way inala dhaqantaa oo way inala macaamishaa waxay inoo aragtaa qaran cagihiisa isku taagay. Dhibaatooyin kale oo aqoonsiga inaga hor taagan oo walaalaheena Soomaaliya ay sabab u yihiina way jirtaa, iyadoo dunidu indho kale wax ku eegayso. Balse waxay ku xidhan tahay ka midho dhalinta mustaqbalkeena iyo madax-banaanideena sida aynu iskugu xidhnaano, sidaynu u dagaal galno iyo sidaynu dalkeena u difaacano iyo sida aynu midnimadeena u muujino ayay ku xidhan tahay.”
Madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhalinyarada jaamacadaha iyo bulsho weynta Somaliland-ba ay door weyn ka qaadan doonaan horumarinta dalka iyo difaaca qadiyadiisa.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu ardayda Jaamacadaha uga xog-waramay socdaaladii kala duwanaa ee dhawaan uu ku soo maray dalalka Turkiga, Ingiriiska, Maraykanka iyo Itoobiya, waxaanu tilmaamay in dhammaantood socdaaladaasi ay caalamka u bandhigayeen madax-banaanida Somaliland iyo sidii loo iib geyn lahaa qadiyadda Somaliland.
“Waxaas oo socdaalka waxaanu u galaynay inaanu iib-geyno oo qadiyadeena gaadhsiino caalamka.dunida qaar badan baa inagu riixaysa oo doonaysa sidii ay iskugu noqon lahaayeen Somaliland iyo Soomaaliya.umaddanise halganka ay u soo mareen way ogtahay waxay ku tashatay oo goosatay inay la soo noqoto xoriyadeeda iyo madax-banaanideeda. Waxase ay ku xidhan tahay sida ay dhalinyaradeena iyo bulshadeenu iskugu xidhnaato si ay u noqoto qadiyad loo mideebo oo meel looga soo wada jeedsado,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku ladhay “Waxaan 100% ku kalsoonahay in halgankaasi uu noqdo mid aan meel uga soo wada jeedno dhammaanteen, 22-guuradii ka soo wareegtay la soo noqoshada madax-banaanideena ayaa loo dabaal degayaa, waynu u soo wada bixi doonaa, dalka oo qudha looga dabaal degi maayo dhulka dadkeenu degan yahay oo dhan baa looga dabaal-degayaa wufuud badan baa ku maqan inay hawshaasi wax ka fuliso oo ay bulshada horkacdo oo ay hormuud ka noqoto.”
Madaxweynuhu waxa uu uga mahad celiyay ardayda Jaamacadaha kulanka ay ku soo marti qaadeen, waxaanu ku sifeeyay iftiinka iyo ilayska qaranka.